ललितपुरमा हातखुट्टा बाँधेर खुँडाले टाउको छि’नाएर शाहीको ह’त्या! परिवारमा यस्तो रुवाबासी (भिडियो सहित ) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > ललितपुरमा हातखुट्टा बाँधेर खुँडाले टाउको छि’नाएर शाहीको ह’त्या! परिवारमा यस्तो रुवाबासी (भिडियो सहित )
admin June 10, 2020 भिडियो, समाचार 0
काठमाडाैँ, २८ जेठ ।
ललितपुरको बाँडेगाउँ मा खुँडा प्र’हार गरी हातखुट्टा बाँ’धेर टाउको छि’नाइएको अवस्थामा एक श’व फेला परेकाे छ । बाँडेगाउँमाभाडामा बस्दै आएका ३८ वर्षीयअमित शाहीको खुँडाले हानेर ह’त्या गरिएको प्रहरीले जनाएकाे छ ।
ललितपुर प्रहरी प्रमुख एसएसपी टेकप्रसादराईले भने, हातखुट्टा बाँधेर टाउको छिनाइएको अवस्थामा शव फेला परेको छ ह’त्या कसले र किन गर्यो भन्नेबारे अनुसन्धान गर्दैछौं ’लकडाउनका बीच पछिल्लाे समय अपराध गतिविध बढ्न थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सन्देश : नेपाल हेपिन तयार छैन, हेपिन मान्दैन
काठमाडौ रेडजोनमा : सिडिओ भन्छन्, ‘भदौ ८ वाट पूर्ण निषे धा ज्ञा !